Somalilaanay ma dibaa loo soconayaa mise Horaa loo soconayaa ? Inta ay dalka Maamulayaan Sadex Gole oo Maandheytkoodii dhamaaday ! | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Somalilaanay ma dibaa loo soconayaa mise Horaa loo soconayaa ? Inta ay...
Somalilaanay ma dibaa loo soconayaa mise Horaa loo soconayaa ? Inta ay dalka Maamulayaan Sadex Gole oo Maandheytkoodii dhamaaday !
Dalku Wuxuu u baahan yahay karti- hogaamineed oo qoto dheer oo ka mudh-bixi karta dabeylaha siyaasadeed ee maanta ka taagan Somaliland iyo mandaqada. Waxaa Xukuumadihii kala danbeeyey ee JSL ay caadeysteen in kolba dib loo dhigo Doorashooyinka iyaga oo indhaha ka qarsanaaya cawaaqib xumada ay ku reebayso habka Dimuqraadiyadeed ee aynu qaadanay. Waxay arintani baabiisay sumcadii iyo karaamadii Somalilaan, Gaar ahaan hab maamuuskii gaarka ahaa iyo hab dhaqankii Siyaasadeed ee Caalamku Somalilaan ku qaabili jirey. Hab maamuuskaas ( Somaliland Special Arrangement ) Wuxuu hada ku danbeeyey in uu meesha ka baxo. Waxaana dhamaan mashaariicdii Horumarineed ee Somalilaan la siin jirey lagu xawilay Somali-Weyn si loogu soo mariyo, taana waxaa keenay Siyaasad xumadii xukuumadihii Kulmiye ee kala danbeeyey .
Previous articleHarada Lake Victoria oo ah bad Macaan una dhaxaysa wadmada Uganda, Kenya iyo tanzania ayaa Shilalka Doonyaha qalibmayaa kusoo mateen Tii u danbaysayna waxaa ku Qaraqmay Boqol qof waxana ku dhinaty 29 qof
Next articleBoqor Burhan Oo Puntland Ugu Baaqay Inay Taleex Gobol U Magacow-Do , Isaga Oo Somaliland Ku Dhex Sugan Yahay